Vaovao - Fomba fanamboarana masinina fanadiovana anatiny ao anaty kitapo FIBC
Ny maodelin'ny fampiasana dia an'ny sehatry ny fitaovana mekanika, indrindra ny masinina fanadiovana anatiny, ny masinina fanadiovana anatiny ao anaty kitapo FIBC.
Kitapo kaontenera FIBC, fantatra ihany koa amin'ny kitapo fitoeran-javatra malefaka, kitapo tonta, kitapo misy habakabaka, sns. Miaraka amin'ny crane na forklift, dia mety hahatsapa fitaterana anaty container izy io. Izy io dia mety amin'ny fitaterana vovoka be dia be sy akora granular. Ny kitapo misy fitoeran-javatra dia karazana fitoeram-pandefasana fitaterana miovaova, izay be mpampiasa amin'ny fitaterana sy ny fonosana vovoka, sombin-javatra ary ny entana manakana toy ny sakafo, voamaina, fanafody, indostrian'ny simika, vokatra mineraly, sns. Ny kitapo fitoeran-javatra dia vita amin'ny polypropylene amin'ny maha-akora fototra azy, mampiditra zava-manitra marin-toerana kely, mifangaro, manalefaka ary mamoaka ny sarimihetsika plastika amin'ny alàlan'ny extruder, manapaka amin'ny landy, ary avy eo mamelatra, manome tanjaka avo sy elongation ambany PP landy vita amin'ny hafanana, ary avy eo fanaovana ny lamba fototra vita amin'ny lamba vita amin'ny plastika amin'ny alàlan'ny fihodinana sy famonoana, ary manjaitra azy amin'ny antsamotady sy kojakoja hafa mba hanaovana kitapo taonina.
Ny maodelin'ny fampiasana dia miavaka amin'izany: ny fitaovana fampitaovana dia mpankafy, ary ny mpankafy dia miorina amin'ny fotony amin'ny alàlan'ny fototr'ireo mpankafy.
Ny masinina fanadiovana anatiny ho an'ny kitapo fitoeran-javatra dia miavaka amin'izany: ny boaty lehibe dia omena takelaka fisaronana ambony ho an'ny famehezana, ny vatan'ny boaty lehibe dia omena fantsona ho an'ny fahalotoana latsaka, ny faran'ny fantsona dia omena takelaka baffle tsy misy rivotra. izay mirona hapetraka, ary ny fivoahana dia miforona eo afovoan'ny rivotra baffle, ary ny efijery fanivanana ho an'ny sivana sisa tavela sy ny fahalotoana dia nalahatra teo ambanin'ny fivoahana, ary ny ampinga rivotra dia ampiasaina hitarika ny rivotra sy ny loto ao amin'ilay sivana efijery Ny lakandrano dia mamaky ny takelaka ambony ambony ary mivelatra amin'ny vatan'ny boaty lehibe, ary ny tendrony ambony amin'ny fantsona dia omena siny fitarihana miendrika funnel amin'ny fitarihana ny fahalavoan'ny loto. Ny mpankafy dia mifamatotra amin'ny seranan-tsambo ambany amin'ny fantson-drivotra izay amboarina axial ao anaty fantsona amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody anaty izay voalamina ao amin'ny vatan'ny boaty lehibe. Ny seranan-tsambo ambony an'ny fantsom-pifandraisana ivelany dia mivoaka avy amin'ny siny mpitari-dalana, ary ny tendrony ambony amin'ny vatan'ny boaty lehibe dia omena siny fitarihana miendrika funnel Ny tapany ambany dia mifamatotra amin'ny fantsom-pivoahan'ny rivotra voalamina eo ambanin'ny fotony.
Amin'ny ankapobeny, ny karbaona kalsioma dia ampiana amin'ny lamba ho an'ny andiana kitapo fitoeram-bokatra. Satria matevina dia matevina ny lamba ifotony, avo ny atin'ny karbaona karbonika isaky ny faritra iray. Raha ratsy ny kalitaon'ny gazy karbonika, dia be ny vovoka, izay hisy fiantraikany amin'ny hery famonoana lamba. Mandritra izany fotoana izany dia hisy ny faran'ny kofehy, ny tsipika ary ny fako hafa ao anaty kitapo fitoeran-javatra. Amin'ny sehatra teknika sasany izay mila diovina tsara ao anaty kitapo kaontenera dia ilaina ny manadio ny vovoka sy ny tsipika ao anaty kitapo kaontenera.